စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 29/12/2019)
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဘို့ဤအထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင့်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးကူညီသင့်တယ်. ပါစေရဲ့ကရင်ဆိုင်ရသောကြောင့်, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်! သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုင်, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အခြားသူများရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၌သင်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များထွက်ခွာ၏အတွေးဖြစ်ပါသည်. သိသာထင်ရှားတဲ့အဘယ်သူမျှမကသူတို့ကိုအပြီးသင်ပြုလမ်းကိုကြည့်ရှု! မှန်သော?
ဘာလုပ်ရမှန်းများအတွက်မြောက်မြားစွာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် သငျသညျအိမ်ကနေခရီးသွားလာကြသောအခါ. ခွေးဟိုတယ်များ, တစ်အိမ်စောင့်ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလွှဲပြောင်း, တစ်ဦးချစ်စရာတဦးတည်းဆိုသော်ငြား, သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဖို့ရွေးချယ်မှုအကြားရှိပါတယ်. ဤလူနှုနျးသောအသုံးအများဆုံးများမှာ. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံမရှိကအခြားရွေးချယ်စရာသည်နှင့်သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့သွားလာရန်ရှိသည်. ဒါဟာအတော်လေးခက်ခဲတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, Save တစ်ဦးကရထားကိုသင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့သောထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များရှိပါတယ်!
အသစ်တခုအရပျသို့ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရလိမ့်မည်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သူကတတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်နေဆဲသေချာပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးအဆင်ပြေခရီးမှသော့ချက်အောင်. သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပုံမှန်ကစားစရာကိုယူခဲ့, စောင်နှင့်သင့်ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်အဆင်ပြေပါစေအံ့သောငှါကအခြားပစ္စည်းများ. သူတို့ငြိမ်သက်ခဲ့ကြသည်မှားဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး? အနာဂတျမှာသင်ပိုမိုအဆင်ပြေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားကြစေဟုအဆုချသေချာအောင်လုပ်ပါ.
သင်ကနဲ့တူသို့မဟုတ်မရှိမရှိ, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဤထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင်လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုပုံစံလုပ်ဖို့ဂုဏ်နရှိနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်! သငျသညျခရီးသွားလာ start ရုံမရောက်မီ, အချို့သောသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအဘို့ထိုသူတို့ယူ! အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပိုရှည်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်သင့်ချစ်သူတို့ fluffy အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူတစ်ပြင်းထန်သော playtime ၏, သူသို့မဟုတ်သူမအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ပဲလွန်းပင်ပန်းစေခြင်းငှါ. သင်တစ်ဦးပြေးဘို့သိမ်းယူခံရဒီတော့ဝါသနာမဟုတ်ကြောင်းကြောင်တစ်ကောင်ရတယ်လျှင်, အထဲမှာသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကြိုးစား. Make-ပြောင်းကုန်ပြီကစားစရာဥပမာဖုန်မှုန့် mops များ၏ပုံစံများအတွက်လာနိုငျ! ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ… ကျွန်မအတွေ့အကြုံရှိသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားအတွက်!
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိ. နိုင်ငံအများအပြား quarantine ကာလလိုအပ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားအချိန်ဖြုန်းချင်လျှင်, သင်ဤကို double-စစ်ဆေးသေချာအောင်! နိုင်ငံအများစုခွေးရူးပြန်ရောဂါများအတွက်ရိုက်ချက်များလိုအပ်, bordetella (ခှေးအိမျချောင်းဆိုး), နှင့် parvo. တစ်ခုသံရုံး Call နှင့် သင့်ရဲ့သုတေသနအွန်လိုင်းပြုပါ တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်များကိုများမှာအဘယ်အရာကိုမြင်ရန်, အခါသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းနေရာလေးကိုရှိသည်ဖို့သေချာအောင် နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူး.